लन्डन एयरपोर्ट | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | एयरपोर्टहरू, लन्डन
लन्डन यो विश्वमा सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको शहरहरू मध्ये एक हो, र लाखौं मानिसहरू यसका एयरपोर्टहरू मार्फत हर समय परिभ्रमण गर्छन्। तपाईंले हेथ्रो वा ग्याटविकको बारेमा सुनेका हुन सक्नुहुनेछ, तर वास्तवमा अ capital्ग्रेजी राजधानीमा बढी विमानस्थलहरू छन्।
कुल मिलाएर, लन्डनमा छ वटा एयरपोर्टहरू छन् र आज हामी तपाईंहरू सबैको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौं, तिनीहरू कस्तो हुन्, कहाँ छन् र यातायातको माध्यमले तिनीहरूलाई केन्द्रमा जोड्दछ। यसैले, तपाईले अर्को यात्रामा कुन एयरपोर्ट प्रयोग गर्ने भनेर छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
1 हीथ्रो एयरपोर्ट
2 ग्याटविक एयरपोर्ट
3 लुटन एयरपोर्ट
4 Stanted एयरपोर्ट
5 शहर एयरपोर्ट
6 साउथेन्ड एयरपोर्ट
सबै सबैभन्दा लोकप्रिय बाट सुरू गरौं: हीथ्रो एयरपोर्ट शहरको पश्चिम केन्द्रमा छ, करीव 32२ किलोमिटर। यो विश्वको सबैभन्दा व्यस्त मध्ये एक हो, यो अनुमान गरिएको छ कि १ 190 ० हजार यात्री प्रति दिन आउँछन् र प्रस्थान गर्छन् र यो विश्वको एयरपोर्ट हो जुन विदेशी यात्रुहरूको ठूलो संख्यासँग डिल गर्दछ।
विमानस्थल यसका चार टर्मिनलहरू छन् रेस्टुरेन्टहरू, पसलहरू, विनिमय घरहरू, पर्यटक सूचना कार्यालयहरू र सामान भण्डारणको साथ। आगमन क्षेत्र टर्मिनल १,,, and र the को तल्लो तल्ला र टर्मिनल २ को पहिलो फ्लोरमा अवस्थित छ। सबै आगमन यात्रुहरू बन्धन नियन्त्रण, सामान दावी र भन्सार मार्फत जान्छन्। हलमा पहिले नै तपाईंसँग यात्रा सुरु गर्नको लागि सबै पसलहरू र सुविधाहरू छन्।
प्रस्थान क्षेत्र टर्मिनल १ को पहिलो फ्लोरमा छ, टर्मिनल २ को चौथो र पाँचौं फ्लोर र टर्मिनल of को तहखानेमा, टर्मिनल of को दोस्रो तला र टर्मिनल of को माथिल्लो तलामा छ। हिंड्रो एयरपोर्टलाई लन्डनमा जोड्ने यातायातको साधन के हो?
को लागी धेरै विकल्पहरु छन् रेलहरू। त्यहाँ छ हीथ्रो एक्सप्रेस यो सब भन्दा छिटो तरिका हो र १ London-२० मिनेटमा तपाईंलाई लन्डन प्याडिdingटनमा छोड्छ। सेवा बिहान 15 कार्य गरीरहेको छ बिहान ११::20 सम्म। अन्य सेवाहरू प्रदान गरिएको छ Tfl रेल प्याडिंग्टन आइपुग्दै तर यसभन्दा पहिले इलि Broad ब्रॉडवे, वेस्ट ईलि,, हनवेल, साउथल र, हेज र हार्लिtonटन। यो टर्मिनल २, and र at मा एयरपोर्ट भित्र रोकिन्छ टर्मिनल to सम्म पुग्न त्यहाँ हीथ्रो सेन्ट्रलबाट अर्को निःशुल्क ट्रेन छ।
यी Tfl रेलहरूले लगभग २ minutes मिनेट लिन्छन् र तपाईं एक सामान्य टिकट, क्षेत्र card कार्ड वा कस्तूरीसँग भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ। के तपाईं मेट्रो लिन सक्नुहुन्छ? हो, संग पिकाडिली लाइन र त्यहाँबाट लन्डनको बाँकी ठाउँहरूमा। यो धेरै सस्तो छ तर यसले केहि लामो समय लिन सक्दछ। सबवेले एयरपोर्ट छोड्छ, बिहान :5:१० देखि ११::10। सम्म। यसले करीव minutes० मिनेट लिन्छ र तपाईं यो एयरपोर्ट भित्र तीन स्टेशन मा समात्न सक्नुहुन्छ।
अर्को विकल्प हो नेशनल एक्सप्रेस बस भिक्टोरिया काउच केन्द्रीय बस स्टेशनसँग एयरपोर्ट जोड्दै। यसले and० र minutes ० मिनेटको बीच लिन सक्दछ र त्यहाँ बसहरू छन् बिहान :4:२० र १०:२० सम्म। Easybus यो पनि एयरपोर्ट र केन्द्र बीचमा सेवा प्रदान गर्दछ। रातको बस, N9, हरेक २० मिनेटमा चल्छ र तपाईंलाईf20 मिनेटमा ट्राफलगर स्क्वायरमा खसाल्छ। मूल्य १,75० पाउन्ड हो। स्पष्ट रूपमा तपाई ट्याक्सी पनि लिन सक्नुहुनेछ तर यो महँगो छ, 1 50 र between० पाउन्डको बीचमा।
यो हो लन्डनको दक्षिण, kilometers 45 किलोमिटर। यो लन्डनलाई countries ० वटा देशहरूमा २०० गन्तव्यहरूसँग जोड्दछ र प्रत्येक वर्ष million 200 करोड मानिसहरूले प्रयोग गर्दछन्। यसका दुई टर्मिनलहरू छन्, उत्तर टर्मिनल र दक्षिण टर्मिनल। दुबैको तेस्रो तल्लामा प्रस्थान क्षेत्र हो। यो एक साधारण डिजाइनको साथ एक एयरपोर्ट हो।
Gatwick मा तपाईं Oyster कार्ड किन्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतया यो कार्ड अग्रिम रूपमा खरिद गरिएको छ तर तपाईले यहाँ, उत्तर र दक्षिण टर्मिनलमा पनि भन्डार गर्न सक्नुहुनेछ, जब तपाईं भन्सार छोड्नुहुन्छ वा एयरपोर्ट ट्रेन स्टेशनमा।
त्यहाँ गाडविकलाई लन्डनसँग जोड्ने विभिन्न रेलहरू छन्: हो Gatwick व्यक्त जुन सब भन्दा छिटो हो। यो दक्षिण टर्मिनलबाट प्रत्येक १ minutes मिनेटमा छुट्छ र तपाईंलाई मध्यवर्ती स्टेशनहरू बिना आधा घण्टामा लन्डन भिक्टोरिया स्टेशनमा लैजान्छ। थामेस्लिंक अर्को सीधा सेवा ब्ल्याकफाइअर्स, शहर थामेस्लिंक, फरिंगडन र सेन्ट प्याक्रस इन्टरनेसनलमा प्रति घण्टा चार सेवाहरू छन्। दक्षिणी ईस्ट क्रोइडन र क्लफाम जंक्शन हुँदै लन्डन भिक्टोरियामा नियमित सेवाहरू प्रदान गर्दछ।
बस द्वारा यो को सेवाहरु को साथ पनि सम्भव छ राष्ट्रीय एक्सप्रेस (ग्याटविक - भिक्टोरिया कोच स्टेशन), हरेक आधा घण्टा। मध्यवर्ती स्टेशनहरूको साथ केहि सेवाहरू छन्। EasyBus पनि राम्रो फ्रिक्वेन्सी छ र यो सस्तो छ, पनि मध्यवर्ती स्टप बिना सारा रात चलिरहेको। यस कम्पनीको साथ एक घण्टाको हिसाब गर्नुहोस्।
अवश्य पनि, तपाइँ ट्याक्सी लिन सक्नुहुन्छ र ड्राइभरलाई भाडाको अनुमानका लागि सोध्न सक्नुहुन्छ, तर यो रेल वा बस जस्ता सस्तो छैन।
यो हो उत्तर पश्चिम लन्डन र यो बेलायतमा सबैभन्दा ठूलो हो। यो कम लागत कम्पनीहरूको आधार हो र मध्य लन्डनबाट केवल miles 56 माईलको दूरीमा छ। दुबै बिन्दुहरू जोड्ने उत्तम तरिका हो रेल बाट किनकि एयरपोर्टको आफ्नै स्टेशन छ।
यात्रा पूर्वी मिडल्याण्ड ट्रेनहरूमा २१ मिनेट लाग्छ. थामेस्लिंक यो यहाँ Thameslink Farringdon, ब्ल्याकफ्रिअर्स र सेन्ट Pancras अन्तर्राष्ट्रिय को सेवा संग संचालन गर्दछ। छ वटा ट्रेन हरेक घण्टा र रातमा एक घण्टा प्रस्थान गर्दछ। यसले करीव 40० मिनेट लिन्छ।
लन्डनको साथ एयरपोर्ट जोड्ने अर्को तरीका भनेको बस हो: राष्ट्रीय एक्सप्रेस यो प्रति दिन services 75 सेवाहरू छन् र यात्रा एक घण्टा र एक चौथाई हो, बढी वा कम। स्टपहरू सेन्ट जोन्स वुड, फिन्चले रोड, मेरीलेबोन पोर्टम्यान स्क्वायर, गोल्डर्स ग्रीन, भिक्टोरिया रेल स्टेशन, र भिक्टोरिया कोच स्टेशनमा छन्। EasyBus यसले ब्रेन्ट क्रस, फिन्चले रोड, बेकर स्ट्रिट, अक्सफोर्ड स्ट्रीट / मार्बल आर्च र लन्डन भिक्टोरियामा स्टपहरूको साथ पनि काम गर्दछ। दर २ पाउन्डबाट हो।
अर्को कम्पनी हो टेराभिजन कम लागतको बसहरू जुन प्रत्येक २० मिनेटमा बिन्दु समयमा छुट्छ र ब्रेन्ट क्रस, बेकर स्ट्रीट र मार्बल आर्चमा भिक्टोरिया कोच स्टेशन जाने क्रममा रोकिन्छ। एक मानक टिकटको लागत १ p पाउन्ड। अन्तमा, ग्रीनलाइन यसको सेवा प्रदान गर्दछ 757। के तपाईं ट्याक्सीबाट हुनुहुन्छ? खैर, तिनीहरूले करीव 80० पाउंड लागत ...
यो लन्डनको उत्तर पूर्वमा छ र धेरै कम लागत कम्पनीहरूले प्रयोग गर्दछ। वास्तवमा यो बेलायतको तेस्रो व्यस्त एयरपोर्ट हो र युरोपमा सब भन्दा द्रुत बृद्धि हुने एक हो। यो मध्य लन्डनबाट करीव kilometers० किलोमिटर टाढा छ र लन्डन धेरै यूरोपियन र भूमध्य गन्तव्यहरु संग लिंक गर्दछ।
एयरपोर्ट लन्डन संग जोडिएको छ रेल र बसहरू। सबै भन्दा छिटो माध्यम छ Stansted एक्सप्रेस, प्रत्येक १ minutes मिनेटमा टर्मिनल मुनि अवस्थित स्टेशनबाट प्रस्थान गर्ने सेवाहरूको साथ। यात्रा minutes 47 मिनेट छ र ot 36 तोटेनह्याम हेलेमा, यदि तपाईं स्ट्र्याफर्ड र ट्यूबको भिक्टोरिया लाइनमा जडान गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने। सेवा डटमा प्रस्थान गर्छ, र एक पौवा साढे एक देखि एक घण्टाको लागि।
त्यहाँ बसहरू पनि छन्, उदाहरणका लागि राष्ट्रीय एक्सप्रेस जुन दिनभर भिक्टोरिया बस स्टेशनसँग गोल्डर ग्रीन, फिन्चले रोड, सेन्ट जोन्स वुड, बेकर स्ट्रीट र मार्बल आर्कमा स्टपको साथ जोडेर दोस्रो सेवा लिभरपूल स्ट्रिटमा स्ट्राफर्ड, ह्वाइटचेपल, शर्टिच, बेथनल ग्रीन, माइल एन्ड र मा रोकिन्छ। ढोग। दरहरू £ at मा सुरु हुन्छ।
EasyBus सस्तो छ, हरेक १ 15 मिनेट, दिनको २ hours घण्टा, हप्ताको सात दिन अपरेट गर्दछ कम क्रिसमस। यात्रामा २ घण्टाको भाडाको साथ बेकर स्ट्रिटको लागि एक घण्टा र एक चौथाई सीधा लाग्छ। तपाईं अनलाइन बुक गर्न सक्नुहुनेछ र राम्रो मूल्यहरू पाउनुहुनेछ। टेराभिजन यसले यहाँ तीन सम्भावित सेवाहरूसँग सेन्ट्रल लन्डनसँग एयरपोर्ट जोड्ने कार्य गर्दछ: भिक्टोरिया कोच स्टेशनको लागि, लिभरपुल स्ट्रीट स्टेशनको लागि मार्ग र स्ट्र्याटफोर्डको सेवा।
ट्याक्सीको लागी १०० पाउण्ड लाग्न सक्छ। कालो ट्याक्सीहरू यहाँ अपरेट हुँदैन तर लन्डनबाट एयरपोर्टसम्म तपाईं लिन सक्नुहुनेछ। रात वा सप्तान्त सेवाको लागि ट्याक्सी शुल्क।
यो लन्डनमा सबैभन्दा धेरै पहुँचयोग्य एयरपोर्टहरू मध्ये एक हो किनकि यो लगभग दश किलोमिटर टाढा छ अरू केहि हैन। यो एक एयरपोर्ट हो जुन व्यावासायिक यात्रीहरू द्वारा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ र मूलतः न्यू योर्कको लागि उडानमा विशेषज्ञता दिन्छ। Es pequeño र त्यसैले अरु भन्दा धेरै सजिलो। यो एक एकल सुपर टर्मिनल छ।
यो एयरपोर्टमा तपाईं मेट्रो, बस वा ट्याक्सीबाट त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ. मेट्रो यसलाई धेरै राम्रोसँग जोड्दछ शहरको साथ र डकल्यान्ड लाइट रेलवेमा यसको आफ्नै स्टेशन छ जुन तपाईंलाई सिधा जडान स्टेशनहरू (क्यानिंग टाउन, स्ट्र्याटफोर्ड र बैंक) मा लैजान्छ। सेवा प्रत्येक १ minutes मिनेटमा चल्दछ र सामान्यतया मेट्रोको बराबरको दरहरू हुन्छन्।
स्थानीय बसहरूले एयरपोर्टलाई लिंक गर्दछ: 473 474 र XNUMX XNUMX। छोटो दूरीको लागि ट्याक्सीहरू व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। दरहरूको लागि तपाईले एयरपोर्ट वेबसाइट भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ।
लन्डनको छैठौं एयरपोर्ट, अवस्थित छ लन्डनबाट kilometers 64 किलोमिटर। यो संग दुई टर्मिनलहरू र शहर को मध्य क्षेत्र संग एक राम्रो सम्बन्ध। ट्रेन आधारभूत छ त्यसैले तपाईं एयरपोर्ट र लन्डन लिभरपूल स्ट्रीट स्टेशन, स्ट्र्याटफोर्ड मार्फत, दिनभरि र हरेक १० मिनेटको बीचमा सेवाहरूको फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। एक घण्टा भन्दा कम यात्रा गर्न अनुमति दिनुहोस्।
तपाईं यो यात्रा पनि गर्न सक्नुहुन्छ बसबाट। हुनसक्छ तपाईं रातमा आइपुग्नुहुन्छ र ट्रेनको फाइदा लिन सक्नुहुन्न वा तपाईंको उडान बिहान सबेरै छोड्दछ। त्यसोभए त्यहाँ बसबाहेक अरू कोही छैन र यो अर्थमा यो छ राष्ट्रीय एक्सप्रेस ११ राति :11: at at मा एयरपोर्टबाट छुट्ने रातको बस सेवाको साथ र स्ट्र्याटफोर्ड र लन्डन लिभरपूल सडक स्टेशन हुँदै बिहान Vict:२:45 मा भिक्टोरिया बस स्टेशन आइपुग्छ। उल्टो त्यहाँ बिहान :1:१:25 मा सेवा छ जुन बिहान :3:१० बिहान एयरपोर्टमा आउँदछ।
को पहिलो समूह X30 बसहरू तिनीहरू यहाँ दुई एयरपोर्टहरू जोड्दै सञ्चालन गर्दछन्, साउथेन्ड स्ट्यान्स्टेड चेल्म्सफोर्ड मार्फत, अधिक वा कम हरेक आधा घण्टामा।
खैर, अब सम्म संग संग छ लन्डन एयरपोर्टहरू। विश्वको बाँकी ठाउँबाट अ capital्ग्रेजी राजधानीमा आउँदा यो सम्भव छ कि तपाईं हीथ्रोबाट पस्नुभयो तर यदि तपाईं युरोप भित्रका अन्य गन्तव्यहरूको लागि यात्रा गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने यी नामहरू मध्ये केही उफ्रिनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » एयरपोर्टहरू » लन्डन एयरपोर्टहरू